ဝိမုတ္တိသုခ (The Bliss Of Emancipation): Homeless အတွေးများ (၂)
သစ္စာအလင်း March 23, 2011 at 8:36 PM
နားယောင်လို့ ပါသွားကြသူတွေကို နားယောင်ရကောင်းလားလို့ အပြစ်ပြောနေမယ့်အစား ကိုယ့်ဘာသာရဲ့  အခြေခံအုတ်မြစ်ကို ခိုင်မာသထက်ခိုင်မာလာအောင်......... ဆိုတာကို အမ သိပ် ကိုထောက်ခံတယ်..။ တစ်ဦိးချင်းစီမှာ တာဝန်ယူ မှုတွေရှိတယ် လို့လည်း ခံယူတယ်..။ ဗုဒ္ဓ ဘာသာ ဆိုတာ ပင်ကိုယ် သဘာဝ အားဖြင့် ကောင်းမွန်ခိုင်မာပြီးသားပါ..။ ဗုဒ္ဓ ရဲ့အဆုံး အမ အတိုင်းကျင့်ကြံနေထိုင် ရင်းစံနမူနာပြတွေ ဖြစ်သင့်တယ် လို့လည်း ထင်တယ်။ Example is better than precept ဆိုတာလိုပါပဲ။ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဆရာတော်တွေ ဖွင့်လှစ်နေတဲ့ သင်တန်းတွေ အခုဆို တော်တော် များများရှိနေကြပါတယ်။ နိုင်ငံခြားသားတယောက် မြန်မာပြည်မှာတရားလာအား ထုတ်တာ ရက်မပြည့်ခင် ပြန်ပြေး တာမေးကြည့်တော့ တရားပြဘုန်းကြီးက ကျောင်းနားက ခွေးကို ရက်ရက် စက်စက်ရိုက်တာမြင်သတဲ့။ အဲဒါနဲ့ ပဲ ဒီ တရားအားထုတ်နည်း မလိုချင်တော့ဘူး ပြောတော့တာ..။ နောက်ကြားဘူးတာတခု က မဟာယန ဘုန်းတော်ကြီး တပါး ထေရဝါဒ ကိုကူးပြောင်းလာတာ.... ထေရဝါဒ ဘုန်းကြီးက နားလည်မှု ကင်း မေတ္တာကင်း မဲ့စွာ မာန နဲ့ နှိမ့်ချပြောဆိုတာ ခံလိုက်ရတော့ စိတ်ဆင်းရဲပြီး မဟာယန ပြန်ဖြစ်သွားတယ် တဲ့..။
ထေရ ဝါဒ သာသနာကို စောင့်ရှောက် တာ ထေရဝါဒ သာသနာရဲ့ အဆုံး အမ အတိုင်းစောင့်ရှောက် ကျင့်ကြံမှု ဟာ အဓိကကျတယ်လို့ အမ မြင်တယ်။ အမ အီတလီမှာနေတုံးက မဟာယန ဘုန်းကြီးတပါးကပြောဘူးတယ်။ ငါတို့က အထင်တကြီး တလေးတစားဆက်ဆံပေ မဲ့ ထေရဝါဒ တွေက နှိမ်ပြီးဆက်ဆံတာ သိပ်အခံရခက်တယ်လို့ ပြောဘူးတယ်။ တကယ်တော့ သူတပါးကိုနှိမ့်ချ ကိုယ့်ကိုကိုမြှင့်တင်တာ မာန ပါနေတာပဲ။ ဘုရားအဆုံးအမ မကိန်းဘူးပေါ့။ ဆွေးနွေးကြည့်တာပါ..။
အမ လည်း ကိုယ်ရေးနေတဲ့ သာသနာ အဆုံးအမ တွေကိုယ့်ကိုယ် မှာ တည်အောင် အရင် နပမ်းလုံး နေရပါသေးတယ်။ စစ်မှန်တဲ့ သူတော်ကောင်းတစ်ဦးပေါ်ထွက်လာ ပြီဆိုရင် တော့ သူ့ရဲ့ အရှိန်အဝါ က မနည်းပါဘူး။ အမတို့ကျေးဇူးတော် ရှင် မြတ်စွာဘုရား ရဲ့ အရှိန်အဝါက ပဲ နေအထောင်၊ လအထောင် ဗြဟ္မာ နတ်အရောင် တို့ထက် မြင့်ဆောင်လွှမ်းမိုးနိုင်တာ ဆိုတော့ သူတော်ကောင်း တစ်ဦးဟာ နိုင်ငံ တနိုင်ငံ။ဒေသ တစ်ခုလောက်တော့ အသာလေး ခြုံလွှမ်းအေးမြစေနိုင်မှာပါ။ အမတို့ တွေ အဇ္စ္ဈတ္တ သာသနာ တိုးတက်ရေး အတွက် ဘက်ပေါင်းစုံက ကြိုးစားကြတာပေါ့။
The Bliss Of Emancipation March 24, 2011 at 5:43 AM
ဟုတ် အမ။ ကျွန်တော်တို့ သာသနာတော်အတွက် နိုင်တဲ့ဝန်ကို ကျရာနေရာကနေ ထမ်းကြတာပေါ့ဗျာ။
(အမပြောတာတွေ ဆွေးတော့ ဆွေးနွေးချင်ပါတယ် အမရေ။ အဆွေးနွေးလွန်ရင် ပွဲဆူမှာ ကြောက်ရသေးတယ်။ :))
ထက်စုနှင်းဆီ March 26, 2011 at 12:49 PM
အမ ပြောတာ ထောက်ခံတယ်. မြတ်စွာဘုရားအဆုံးအမကို တကယ်လိုက်နာနိုင်သူဆိုရင်. သူများကို မနှိမ့်ချပါဘူး။ မှန်တာ ဆွေးနွေးတာပဲ မကြောက်ပါနဲ့။ ပြင်စရာရှိရင် ကိုယ့်ဖက်ကို အရင်ပြင်ရမှာပေါ့. ဟုတ်ဘူးလားးးးးး